Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » culinary » Ndị a bụ obodo nri kacha mma na 2021 na America » Page 2
Kedu ndụmọdụ ị nwere ike ịnye ndị na -eri nri na mmefu ego siri ike?
“Esi nri n'ụlọ - ọ bụ ihe na -atọ ụtọ ma ọ na -adịkarị ọnụ ala karịa iri nri… Nke ahụ kwuru, ọ bụrụ na ịchọrọ iri nri, chọọ nke bụ eziokwu. Ụlọ oriri na ọ Thoseụ Thoseụ ndị dị n'ógbè ahụ na-eme usoro nri oge. O yikarịrị ka ha ga -abụ obere, ndị na -arụrụ onwe ha nwere mgbanwe karịa na menus, nke pụtara nhọrọ ndị ọzọ na ọnụahịa ọnụahịa dị iche iche. Ikekọrịta onye ọzọ bụ ụzọ ọzọ ị ga -esi belata ego. Mmanya na-aba n'anya nwere ike bụrụ mgbakwunye dị mkpa na nlele ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, yabụ ọ bụrụ na ị nwere ike zere mmanya na-egbu egbu ma lekwasị anya naanị na nri, nke ga-enyere aka na mmefu. ”
Carl Behnke, Ph.D. - Prọfesọ Njikọ, Mahadum Purdue West Lafayette
“Tupu COVID-19, oge obi ụtọ n'ebe ụfọdụ aghọọla ihe na-adịghị akpali akpali, ọ na-abụkarịkwa ihe na-adịghị mma. Post-COVID-19, ụfọdụ ụlọ nri yiri ka ha na-anwa ịdọrọ ndị ahịa azụ site na ịnye nhọrọ obi ụtọ dị ụtọ ma dị ụtọ na ọnụ ahịa azụmaahịa. Ndị na -eri nri nwere oke mmefu ego kwesịrị ịlele menus oge obi ụtọ na ụfọdụ ụlọ nri kacha amasị ha. ”
Nancy E. Brune - Onye otu ibe, William S. Boyd School of Law - Mahadum Nevada, Las Vegas
Kedu ihe na -eri nri maka afọ 2021 na kedu ka ọrịa ọjọọ siri metụta agwa oriri ndị America?
Anyị… na -ahụ mmụba nke nri nkasi obi: Pizza kpochapụwo, burger na -enweghị ihe nzuzu, BBQ. Ụdị nri ọ bụla iji nye ndị ahịa nghọta karịa nke ọma yana ichetara ihe bụbu ihe. Enweela mmụba na ndị anaghị eri anụ na ndị anaghị eri anụ. Yabụ na anyị na -ahụkwu nhọrọ ndị anaghị eri anụ na vegan na menu. N'ihi ọrịa na -efe efe na ndị mmadụ na -ahọrọ ịghara iri nri n'ụlọ nri, anyị na -ahụ nhọrọ ndị ọzọ na "ịga" nri na imepụta ihe (bọọdụ chacuterie, ome ome BYO, pọọlụ gourmet, abalị abalị Netflix) E nwekwara mmụba n'ahịa nke “ịga” nri “ngwa kwarantaini, ihe ụtọ na -adọpụ uche mmadụ, nọrọ n'ụlọ D'Oeuvres, laghachi na nugget nkịtị, wdg."
Tracey Brigman, EdD, MS, RDN, LD - Prọfesọ Onye Nlekọta Ọgwụ, Mahadum Georgia
“N'ịbụ ndị na -agbagha ụkpụrụ nduzi oria ojoo, ụlọ ọrụ ndị ọzọ akwagala na mpụga, nke gụnyere obere ntọala, mmekọrịta chiri anya, na ịtụnye enweghị kọntaktị… Ọrịa ọjọọ a mere ka ndị mmadụ na -erikwu nri n'ụlọ, na ikekwe na -eri nri mgbe niile. Maka ụfọdụ ndị ihe na -adabara, nke a ghọrọ ohere ịmụtakwu maka isi nri na ịkwadebe nri na -edozi ahụ. Maka ndị ọzọ, na n'ihi ọtụtụ ihe kpatara ya, nke a pụtara iji nri a na -ahazi ugboro ugboro na kwakọbara yana obere mmega ahụ. Ka nri ọha na-aga n'ihu na-emepe, ndị mmadụ na-alaghachi azụ iri nri oge niile, n'agbanyeghị nhọrọ nri ha nwere ike ọ gaghị abụ nke kacha mara ahụike. ”
A. Elizabeth Goodson - Onye Ntuziaka Na -akụzi, Mahadum America